Weerar khasaaro dhaliyey oo xalay ka dhacay Magaalada Baydhabo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Faah faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar qorsheysan oo xalay lagu qaaday guriga taliyaha ciidanka Asluubta Soomaaliyeed, Mahad Cabdiraxmaan Aadan uu ka dagan yahay gudaha magaalada Baydhabo.
Weerarka oo loo adeegsaday bam-gacmeed ayaa waxaa fuliyey rag hubeysan, kuwaas oo goobta isaga baxsaday falka kadib. Inta la xaqiijiyey waxaa weerarkan ku dhintay ugu yaraan 1 qof, halka ay ku dhaawacmeen 2 qof oo kale oo shacab ah, kuna sugnaa guriga taliyaha.
Ciidamada ammaanka ayaa sidoo kal weerarka kadib sameeyey xalay, illaa saaka howl-gallo baaritaano ah oo lagu baadi goobayo kooxihii ka dambeyy dhacdadaasi.
Guriga la weeraray oo ku yaalla kasoo horjeedka garoonka kubadda cagta Dr Ayuub ee magaalada Baydhabo ayaa xilligaasi ka maqnaa taliyaha ciidanka Asluubta oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo uu xilligan ka howl-galo.